मधेसका बाढीपीडितका लागि के गर्दैछन् दलहरु ? उद्धारको जिम्मा जिल्ला कमिटीलाई नै !
राजनीतिक दलले आफूहरु तराई मधेसका बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुटेको बताएका छन् । तर, धेरै दलले उद्धारको जिम्मा जिल्ला कमिटीहरुलाई नै दिएका छन्, जो आफैं बाढीबाट पीडित छन् ।
कुन दल के गर्दैछन् ?
थापाको टोलीले अर्को अभियान पनि चलाएका छन् । काठमाडौंमा ६ स्थानमा राहत संकलन केन्द्र बनाइएको छ । त्यहा जम्मा भएका राहतहरु प्रभावित क्षेत्रमा लगेर बाडिनेछ, यसका लागि बाल्टिन बनाइएको छ । जसमा औषधि, कपडा लगायतका अत्यावश्यक बस्तुहरु राखिनेछ ।
मधेसमा सहयोगका लागि पहाडका जिल्ला कमिटीहरुलाई समेत आग्रह गरिने एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मधेस केन्द्रित अर्को दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले उद्धारमा सहयोग गर्न पार्टी कमिटीहरुलाई खटाएको बताए । उनले भने, राहतका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गर्दैछौं ।